''ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်ရတာကို စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလို့ မသတ်မှတ်ထားပါဘူး'' ဇာခြည်လင?? - Yangon Media Group
”ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်ရတာကို စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလို့ မသတ်မှတ်ထားပါဘူး” ဇာခြည်လင??
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအတ္ထုပ္ပတ္တိ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်သော’အောင်ဆန်း’ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ကြည်နေရာတွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရမည့် သရုပ်ဆောင်ဇာ ခြည်လင်းနှင့် ခဏတာတွေ့ဆုံခြင်း ..။
မေး-အရင်တုန်းကဇာတ်ကားရိုက်ကူးဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့ပေမယ့်မရိုက်ကူးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အခု ပြန်ရိုက်ကူးတော့မယ်ဆိုတဲ့အ ချိန်မှာ ဘယ်အရာကို အဓိကထား ပြီးတော့ ပြင်ဆင်သွားမလဲ။
ဖြေ-အခုကတော့ အရမ်းကြီးပြင် ဆင်စရာတော့မရှိပါဘူး။ အခုကဇာတ်ညွှန်းရေးနေတာပေါ့နော်။ ဇာတ်ညွှန်းရေးပြီးရင် ကျွန်မတို့ကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမယ်လို့ လည်းသိထားတယ်။ အဲဒီအခါကျ တော့ အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
မေး-ဒေါ်ခင်ကြည်နေရာမှာ ပါဝင်သရုပ် ဆောင်ဖို့က မဇာခြည်လင်းအတွက် စိန် ခေါ်မှုတစ်ခုရောဖြစ်မလား။
ဖြေ-ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်ရတာ ကိုစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလို့ မသတ်မှတ်ထားပါဘူး။ ကျွန်မဘက်ကနေပြီးတော့ တတ်နိုင်သလောက်တော့ အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါ ပြန်ပြီးတော့ အကောင်အထည်ဖော်မှာက ဇာတ်ညွှန်းကအစပြန်ပြီးတော့ အသစ်က ပြန်ရေးမှာ ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ကျွန်မဘက်က တော့ လုပ်ငန်းကော်မတီက ပါဝင်တဲ့သူ တွေဘက်ကနေပြီးတော့ ကူညီပေးမယ်ဆို တာကို ယုံကြည်လို့ ကျွန်မဘက်က အများကြီးတော့ အခက်အခဲမရှိနိုင်ပါဘူး။
မေး-အခုပြန်ရိုက်မယ့်အခြေအနေက ဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်း ပူးပေါင်းပါဝင် တယ်ဆိုတော့ အရင်တုန်းကထက်စာရင် ပြောင်းလဲသွားတာမျိုးရော ရှိလာနိုင်မလား။
ဖြေ-ထွေထွေထူးထူးတော့ ပြောင်းလဲသွားတာတော့မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခုလိုမျိုး ပြန်ပြီးတော့ အကောင်အထည်ဖော်မယ်။ ပြီးတော့ဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်း ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးမယ်ဆိုတာက အား ဖြစ်စေပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ပညာရေးဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားတာလာတာတွေကျတော့ အားလုံးက လစာမဲ့ခွင့်နဲ့လုပ်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုကျ တော့ ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးပြန်ရိုက် တော့မယ့်အနေအထားမှာ ဝန်ကြီးဌာန တွေကလည်းသွားတာလာတာတွေကို ကူညီပေးမယ်လို့သိရတယ်။ အဲဒီအခါကျ ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေသွားတယ်။
မူဆယ်မြို့တွင် လေယာဉ်ကွင်းသစ် တည်ဆောက်ရန် တင်ဒါခေါ်မည်